भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि शेयर गर्नुहोस तपाइको जीवनमा सुख शान्ति र खुसि मिल्नेछ ! – Khabar PatrikaNp
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि शेयर गर्नुहोस तपाइको जीवनमा सुख शान्ति र खुसि मिल्नेछ !
August 9, 2020 4222
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महिमा पढी सेयर गरौ जिवनमा खुसी मिल्नेछतपाईलाई सुनेर अचम्म लग्न सक्छ कि संसारमा ५० हजार भन्दा धेरै प्रकारका शंख पाइने गर्छ। त्यहि ५० हजार मध्यमा कुनै प्रकारको शंख तपाईको घरमा हुन सक्छ। ती शंख मध्य केहि दस शंखका बारेमा आज चर्चा गर्ने छौं।
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो, यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो
जुन धन प्राप्तको लागि शुभ शंख मानिने गर्छ।१ मध्यावर्ति शंख: यस अतभुत शंख धेरै दुर्लभ मानिने गर्छ। यस शंखको मुखको बीचमा खुल्ला भाग रहेको हुन्छ। तपाईको सम्पूर्ण अभिलाषा पुरा गर्न यस शंख उपयोगी रहने गर्छ।२ मावर्ति शंख– यो शंख प्राय बायाँ हातबाट पकडिइने गरिन्छ। यस शंख मिल्न धेरैनै दुर्लभ मानिन्छ भने यसलाई भेट्न असम्भवनै रहने गर्छ। यस शंख चमत्कारिकले भरिपुर्ण हुन्छ भने यसको घरमा स्थापना संगै दरिद्रता हट्छ भने धन प्राप्तिको शृंखला सुरु हुने गर्छ।
३ मोती शंख: यस शंख मानसिक चिन्ता हटाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने श्वास-प्रश्वास सम्बन्धि समस्याको लागि पनि यस शंख काम आउने विश्वास गरिन्छ। यस शंखलाई जहिले पनि गंगाजलले स्नान गरिने गरिन्छ।४ गणेश शंख: यो एक दुर्लभ र चमत्कारिक शंख हो। यस शंखको रुप गणेशसंग मिल्न जाने भएका कारण पनि यसलाई गणेश शंख भनिने गरिन्छ । यस शंख घरबाट नकारत्मक नजर हटाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने घरमा यसले शान्त वातावरण राख्नको लागि मद्दत गर्ने गर्छ।
Prevजुन घरमा गरिन्छ यी ४ काम, सधैँ हुन्छ लक्ष्मीको वास
Nextभाग्यमानी मानिससँग मात्र हुने यी ६ कुरा, तपाईसँग छ’ कि छैन? थाहा पाउनुहोस्
४१ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहरालाई ९ महिनादेखि पालेका होटलवालाको सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियो सहित )
पुनः नियुक्ति नहुने निश्चित भएपछि प्राधिकरणले आजै कुलमानको बिदाई गर्दै..!